Oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato lagu bedelan karo
Waxaan sameeyay liiska 10-kale oo Winamp (laga bilaabo ciyaartoyda standalone aasaasiga ah) si aad tixraac, oo gooni laba qaybood oo waaweyn; Players Standalone iyo Music Toolb Read More >>
Halkan waxaa ku qoran liiska ciyaaryahan wanaagsan 5 kale oo VLC kuwaas oo xitaa ka fiican yahay VLC. Read More >>
Akhri adeegga soo socda oo waxaad ogaan doontaan ugu sareysa 5 kale oo si undelete 360. Read More >>
Iyada oo kale CopyTrans ee Maverick, waxa aad maamuli kartaa music, sawiro iyo videos in Mavericks ka kaaftoomi si xor ah. Read More >>
Maqaalkani waxa uu kuu sheegi ugu fiican Zamzar Alternative, shaqaynaya si degdeg ah, oo taageeraya size file ka weyn oo ka sii qaabab wax soo saarka. Read More >>
Kale MediaCoder Tani waa aalad diinta boosaska badan. Ay u shaqayso si deg-deg, waxa ay taageertaa qaabab warbaahinta ka badan oo aanay files si habsami leh ee tayo sare leh. Read More >>
Toban DVD cirib Alternative Software Talooyin
Waxaad laga yaabaa in user a DVD cirib in loo baahan yahay in beddelan in software ka duwan sabab qaar ka mid ah, ha ahaato incompatibility, qaababka cusub ama sabab kale oo qaar ka mid ah. Waxaad noqon kartaa halkan, maxaa yeelay, aad raadineyso weeyna wanaagsan al Read More >>
Halkan qaar kale oo lacag la'aan ah laga cabsado in Photoshop waxaa lagu soo jeediyay. Haddii aadan rabin in aad bixiso Adobe ee qiimaha sare, uun ka heli bedelaadahani si xor ah u Photoshop. Read More >>
Haddii Prism uma shaqeeyo, kaliya isku day kale oo aad u weyn in aynu aad si fudud loogu badalo videos. Read More >>
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay si aad u hesho iPhoto kale oo ah maamulka sawir fiican iyo in la wadaago. Halkan waxaan ku qor 10ka kale oo iPhoto, waayo, waxaad isku dayaan in ay ka soo. Read More >>
Khaati ka taagan iSyncr oo aad rabto ee badiilka ah? Halkan waxa ku jira 3 qalab ugu sareysa kale iSyncr aad u. Read More >>
Waxaa jira badan oo Winamp kale oo halkaas. Is barbar dhig ku beddeli karo Winamp naftaada! Read More >>
Hagahan waxa uu ka hadlayaa kale oo PhotoRec kala duwan iyo software la mid ah Windows. Haddii aad raadineyso weeyna ka mid ah, waa in idinkaa iska leh halkaan. Waxa ay haatan u hubi! Read More >>
Ma doonaysaa in aad hesho kale Recuva ah? Tanu waa meesha ay kugu habboon. Waxaad ka heli kartaa ugu fiican kale oo Recuva for Windows iyo OS X Mac oo halkan ku soo bixi. Read More >>
Daal isticmaalka doubleTwist? Halkan waxa ku jira 5 kale oo doubleTwist kaas oo sidoo kale u hagaagsan kartaa music qalab Android si fudud. Read More >>
Chita SyncMate oo aad rabto inaad ka heli kale ah? Halkan waa. Maqaalkani waxa uu muujinayaa inaad hogaanka 3 kale oo si SyncMate Mac. Read More >>
Read adeegyada soo socda oo waxaad ogaan doontaan ugu sareeya 10 kale oo ay tirtirto dhakhtar si ay u bixiyaan performancce ka sii fiican. Read More >>
Ma waxaad wajahay rajada laga badiyay faylasha aad midkood ka drive dibadda ama gaari ku adag Read More >>
Waxaan dhamaanteen leenahay xog muhiim ah kaydiyaa laptops iyo kombiyuutarada iyo khasaaraha lama filaan ah xogta noqon karaa mid aad geeri iyo jeer. Halkan waxaad ka heli doontaa 10ka NTFS Undelete kale oo ku Windows iyo Mac si uu u badbaadiyo More Read >>